धमलाले एक दिनमै फेसबुकबाट यसरी ५० हजार बढि कमाउँछन् – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/धमलाले एक दिनमै फेसबुकबाट यसरी ५० हजार बढि कमाउँछन्
धमलाले एक दिनमै फेसबुकबाट यसरी ५० हजार बढि कमाउँछन्
पत्रकार ऋषि धमलाले एक दिनमा कति पैसा कमाउँछन् होलान् ? तपाईँले सोच्नु भयो होला कि उनले एक दिनमा पाँच दश हजार कमाउँछन् । तर होइन, उनले सामाजिक संजाल फेसबुकबाटै दिनको ५० हजार बढि रुपैँया कमाउने गरेका छन् । उनले आफूले समाचार शेयर गरेकै भरमा दिनको लाखौँ रुपैँया कमाउने गर्दछन् । उनको रिपोर्टसनेपाल डट कम नामक एक वेभसाइट छ । उक्त वेभसाईटमा उनी समाचारहरु हाल्छन् । सो समाचारको लिंक उनले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुकमा शेयर गर्छन् । उनले दिनमा एक सय भन्दा बढि समाचारहरु आफ्नो फेसबुकमा हाल्ने गर्दछन् । हरेक पोष्टमा हजारौँ बढि लाईक आउने गर्दछ । उनले शेयर गरेको समाचार दिनमै लाखौँ बढिले हेर्ने गर्दछन् । जति बढिले समाचार हेर्छन् त्यतिनै पैसा फेसबुकले दिने गर्दछ ।
कसरी आउँछ पैसाः फेसबुकले एउटा यस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ जहाँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ । यदि तपाईँसँग वेबसाइट छ भने तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ । फेसबुकले हरेक महिनाको कमाई २२ तारिकमा हाल्ने गर्दछ । उक्त रकम तपाईँले नेपालका कुनै पनि बैंकबाट निकाल्न सक्नुहुनेछ । वेबसाइटमा तपाईँले समाचार वा अन्य कुनै सामाग्री हाल्नुपर्ने हुन्छ । उक्त समाचारको लिंक शेयर गरेपछि धेरैले हेर्नसक्छन् । फेसबुक पेज, ग्रुप वा आफ्नै फेसबुक खातामा उक्त लिंक शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जोकोहिले पनि फेसबुकबाट आम्दानि गर्न सक्छ । तर, तपाईँसँग वेबसाइट, फेसबुक पेज, ग्रुप हुनुपर्दछ । मानिलिऔँ, वेबसाइट एउटा खेतबारी हो । खेतबारीमा विउविजन रोप्नुपर्छ । विउविजन भनेको समाचार वा जुनसुकै कन्टेन्ट हो । विउविजन जति राम्रो भयो त्यतिनै राम्रो फल पाईन्छ । अर्थात्, समाचार वा कन्टेन्ट राम्रो हुनपर्छ । खेतबारीमा विउविजन फलेर मात्र हुदैँन । अब तपाईँको खेतबारीमा फल लागिसक्यो । बेच्नका लागि बजार चाहिन्छ । बजार भनेको फेसबुक पेजा, ग्रुप वा फेसबुक खाता हो । तपार्इँको फल अब बजारमा पुग्छ । जतिबढिले तपाईँको फल मनपराउँछन् त्यतिनै बढि आम्दानि हुन्छ । यसको मतलब तपार्इँले हालेको समाचार जति धेरैले पढ्छन् त्यतिनै बढि पैसा तपार्इँले कमाउन सक्नुहुन्छ ।
पैसा कसरी आउँछ तः तपाईँसँग वेभसाइट भएपछि फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल नामक कार्यक्रम इन्स्टल गर्नुपर्छ । उक्त कार्यक्रम इन्टल गर्न तपाईँले सक्नुहुदैँन । त्यसैले, २० हजार वा २२ हजारमा पैसा आउन मिल्ने टेक्निसियनले बनाइदिन्छन् । तपाईँको खाता नम्बर हालेपछि तपाईँको खातामा पैसा आउन शुरु हुन्छ ।
आमाको माया! अक्सिजन लगाएर छोराछोरीको लागि खाना बनाउँदै महिला
‘उपाध्यक्ष भन्दा मन दुखाउलान् भनेर मात्र प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिएको हुँ’ – ओली
५४ यात्रु बोकेको बस नहरमा ख स्यो, ३० जनाको श’व निका’लियो..हेर्नु’होस्